ဂျူနီယာဝင်း – ဂွတ်ဘိုင် လိုဂိုဟုတ် | MoeMaKa Burmese News & Media
(Junior Win’s Goodbye Logos Hope ကို ကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်သည်။)
(မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၄၊ ၂၀၁၅
၂၀၁၅ အောက်တိုဘာ ၃ရက်ကနေ ၁၄ ရက်အထိလို့ဆိုပါတယ်။ သို့သော် ၃ ရက်နေ့က ဖွင့်ပွဲရှိတာကြောင့် နေ့လည် ၁နာရီကနေ ညနေ၆နာရီ အများပြည်သူများ ဖရီးဝင်ကြည့်ကြရမှာပါ။ စာအုပ်နံ့ရတာနဲ့ မနေထိုင် မထိုင်နိုင် စိတ်ကူးတယဉ်ယဉ်ပေါ့လေ။ အဓိကအားဖြင့်တော့ ကျွန်မဖတ်ချင်နေတဲ့ သိပ္ပံဝတ္ထုတွေ၊ရေးဘရက်ဘာရီရဲ့ ၀တ္ထုတွေ ဘယ်နှစ်အုပ်ပါလာမှာလဲ၊ ကျွန်မဖတ်ချင်နေတဲ့ စာအုပ်စာရင်းကို မှတ်ထားပြီး၊ စာအုပ်တွေရှာဖို့ ကြည့်ဖို့ စိတ်ကူးနဲ့ပါပဲ။
ကျွန်မဖေဖေကတော့ အဲသည်လိုနေရာမျိူးသွားဖို့ လုံးဝအားမပေးပါဘူး။ ဘယ့်နှယ်…. စာအုပ်ဝယ်ဖို့ကို ဒီလိုနိုင်ငံခြားသင်္ဘောကြီးလာမှ သွားရရှာရဖတ်ရမယ် ဆိုတာက ဟုတ်မှ မဟုတ်တာလို့ဆိုတယ်။ နိင်ငံရပ်ခြားမှာ ဆိုရင်…. နေရာတိုင်း စာအုပ်ဆိုင်တွေ တွေ့ဖူးနေတဲ့သူကိုး။ တစ်ဒေါ်လာလောက်နဲ့ လက်တပွေ့ ကြိုက်သလောက်ယူ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ဆိုင်တွေက မှိူလိုပေါက်အောင် မြင်ဖူးနေတာကိုး။ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်အစုံ၊ ရှားပါးစာအုပ်တွေကအစ စာအုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေက စေတနာအပြည့်နဲ့ ရှာပေး ကူညီပေးကြတာတွေကလဲရှိတော့။ ဒါ့အပြင် အခုခေတ်တော့ အမေဇုံကနေ ကြိုက်ရာစာအုပ် လှမ်းမှာတိုင်း အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ပေးနိုင်တဲ့စနစ်က ရှိနေပြန်တယ်။ အမာဖုံးနဲ့ ယူမလား၊ပျော့ဖုံးနဲ့ မှာမလား…. စသဖြင့် ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ဈေးနှူန်းနဲ့ စာအုပ်တွေက ပေါမှပေါကိုး။ ဈေးကလဲ ပေါတော့ လမ်းလျောက်နေတဲ့သူလည်း တစ်အုပ်စနှစ်အုပ်စတော့ကောက်ဝယ်မိမှာပဲကိုးလေ။ ကျွန်မတို့တိုင်းပြည်မှာ တယ်လီဖုန်းဆင်းကဒ်တွေ ရောင်းနေသလိုပေါ့။ မော်တော်ကားအကောင်းစား ကြီးတွေရာချီထောင်ချီတင်သွင်း နေသလို နေမှာပေါ့လေ။ သူများနိုင်ငံများပြောပါတယ် စာအုပ်တွေကိုအဲသလို အဲသလို ပေါများနေတာကို မျက်စိထဲမြင်လာအောင် ပုံဖော်ပြတာပါ။ ဒီတိုင်းပြည်ကတော့ စာအုပ်ဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်။ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်မပြောနဲ့ ဗမာစာအုပ်တွေတောင်မှ စာအုပ်ဆိုင်ရှိတဲ့နေရာကို အရင်ရှာရတယ်။ တကူးတက သွားရနဲ့ စာအုပ်ဆိုင်တိုင်းမှာတောင် စာအုပ်အစုံတွေ့ရတာမျူိုးမဟုတ်။ ဘယ်တိုက်ကထုတ်တဲ့စာအုပ် ဘယ်စာအုပ်ဆိုင်က ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေအောက်မှာ ရှာရ၀ယ်ရတာကိုး…။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ… စာအုပ်တွေ အများကြီး မြင်ဖူးတယ်ရှိအောင် သွားတော့ ကြည့်ရဦးမယ်။ ဖေဖေ့အဆူအဆဲခံပြီး မျက်နှာငယ်ငယ်နဲ့ သွားတော့ သွားလိုက်ဦးမှလေ။
စာအုပ်ဆိုတာ အဲသလိုခက်ခက်ခဲခဲ ကြပ်ကြပ်တည်းတည်းနဲ့ အခေါက်ခေါက်အခါခါ သွားရ၊ ရှာရ၊ ၀ယ်ရတယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ရဲ့တိုင်းပြည်။ စာအုပ်ဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်။ ကျွန်မကတော့ အဲသည်စာအုပ်တွေကို ၀ယ်ပြီးပြန်ရောင်းတဲ့ စာအုပ်ဆိုင်တွေဆီကိုပဲ ခြေဦးလှည့်ဖို့ အခုကတည်းက စဉ်းစားနေမိတယ်…. ဂွတ်ဘိုင် လိုဂိုဟုတ်….
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ဂျုနီယာဝင်း, ခေတ်ပြိုင်အတွေ့အကြုံ, ခေတ်ပြိုင်အတွေ့အကြုံ